Ịgụ Oge: <1 nkeji You'regaghị enweta 100% nke ahịa mgbe mmadụ tinyechara ngwaahịa ahụ na ụgbọ ibu azụmahịa gị, mana obi abụọ adịghị ya na ọ bụ ọdịiche ebe ego na-abawanye. Enwere usoro iji dọpụta ndị mmadụ azụ na back ịtụgharị uche bụ otu n'ime ha. Mgbasagharị ahịa na-esochi ndị mmadụ mgbe ha hapụrụ ụgbọ ahịa na mgbasa ozi na-ebugharị ha ka ha na-eleta saịtị ndị ọzọ. Nloghachi ahụ dị mma na mkpọsa nlọghachi. Agbanyeghị, nke ahụ bụ mgbe ha mechara
Ịgụ Oge: <1 nkeji N'oge na-adịbeghị anya anyị malitere ịrụ ọrụ na Ndepụta Angie ma ọ bụrụlarị onye na-emeghe anyị anya ọtụtụ azụmaahịa na-eduga site na nyocha ha, nyocha na azụmahịa. Maka azụmaahịa mpaghara na-enye ndị ahịa ha nnukwu ọrụ, nyocha ndị akwụ ụgwọ na ndepụta Angie bụ ezigbo ego. Dabere na nyocha ahia ahia ahia nke American Express OPEN kwuru, obere azụmaahịa US ka nwere ike ịdabere n'okwu ọnụ dị ka ụzọ kachasị elu maka ndị na-azụ ahịa ịchọta ha.
Ịgụ Oge: <1 nkeji Anyị zipụrụ banyere Milo, nnweta nke eBay. Ebumnuche Milo bụ ịnwe ngwaahịa niile na shelf ọ bụla dị na weebụ. Ha na-ebugharị ụlọ ahịa ezumike a n'oge ezumike a! E nwere ụfọdụ ndị dị ukwuu Atụmatụ ebe a na ohere maka mkpọsa outlets iji gbakwunye ha instore ahịa site na-akwọ ụgbọala okporo ụzọ ha ụlọ ahịa si online. Dị ka oge ọ bụ oge iji kpoo mgbịrịgba Jingle na kuki Gingerbread, wee malite ịkwọ ụgbọala
Ịgụ Oge: 2 nkeji N’izu gara aga, mụ na Rob Eroh, onye na-arụ ọrụ ngwaahịa na injinịa na Milo. Milo bụ ụlọ ọrụ ọchụchọ ụlọ ahịa nke gbakwunyere na Point of Sale (POS) ma ọ bụ orlọ Ọrụ Na-enye Aka (ERP). Nke a na - eme ka Milo bụrụ injin na - achọ ihe kachasị mma ma a mata ihe dị na mpaghara gị. Ebumnuche Milo bụ ịnwe ngwaahịa niile na shelf ọ bụla na web…
Ịgụ Oge: 4 nkeji N'afọ gara aga mụ na Patronpath nọrọ kemgbe bụ ezigbo ihe ịnya ụgbọ ala. Companylọ ọrụ ahụ na-eto eto nke ukwuu ma na-aga nke ọma! Anyị meriri onyinye Techpoint Mira. Anyị mechara mmepe nke njikọta 4 POS - Micros, POSitouch, Comtrex na Aloha. Anyị megharịrị interface njirimara iji bulie mgbanwe maka ndị ahịa anyị. Anyị gbakwunyere redundancy na atụmatụ nche na ngwa ahụ. Ọbụna anyị tụbara na saịtị ụlọ oriri na ọtaụ forụ maka anyị